မြန်မာနဲ့ နယ်စပ် ကန်ချနာဘူရီ ပြည်နယ် ဝင်ပေါက်တွေကို ပိတ်ရန် ထိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် အမိန့်ပေး
အိမ်နီးချင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ သံသယဖြစ်ဖွယ် ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကြောင့် ရောဂါပျံ့နှံ့ကူးစက်မယ့်အရေး ကာကွယ်ဖို့အတွက် မြန်မာနဲ့နယ်စပ် ကန်ချနာဘူရီပြည်နယ် ဝင်ပေါက်လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကို ပိတ်ထားဖို့ ထိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချန်အိုချာက အမိန့်ထုတ်လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ပိတ်ပင်ရမယ့် နယ်စပ်လမ်းကြောင်းတွေကတော့ မြောင်ခရိုင်ရှိ Phu Nam Ron စစ်ဆေးရေးဂိတ်၊ သာယွတ်ခရိုင်ရှိ ဘွန်ဒီ ဂိတ်၊ သောင်ဖာဖန်ခရိုင်ရှိ Ban E Tong ဝင်ပေါက်နဲ့ ဆန်ခလာဘူရီခရိုင်ရှိ ဘုရားသုံးဆူ နယ်စပ်ဂိတ်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
တနင်္ဂနွနေ့(သြဂုတ် ၃၀) က အမှတ် ၁၀၄ တပ်ရင်း တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် သာကတ်လော့ဆီရီဟာ မြောင်၊ ဆိုင်ယွတ်နဲ့ ဆန်ခလာဘူရီခရိုင်တွေမှ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံကာ ဘုရားသုံးဆူ နယ်စပ်ဂိတ် အနီးအနားဝန်းကျင်တွေမှာ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဟန့်တားရေးအစီအမံတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာ ရောဂါကူးစက်မှုတွေ တကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားနေကာ ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်ဂိတ်နဲ့ ၂၇၀ ကီလိုမီတာသာဝေးတဲ့ မော်လမြိုင်မြို့မှာလည်း ပိုးတွေ့လူနာတွေ၊ သံသယရှိလူနာတွေ တွေ့လာရပြီလို့သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
လုံခြုံရေးဌာန၊ စစ်တပ်၊ ရဲ၊ လဝကနဲ့ ကျေးရွာလူကြီးတွေဟာ ဘန်နန်ကွတ် စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှ ဘုရားသုံးဆူဧရိယာအထိ သဘာဝ၀င်ပေါက်တွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် စစ်ဆေးစောင့်ကြည့်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
ထိုင်းနဲ့ မြန်မာ ရွာသားတွေ နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်တဲ့ သဘာဝ ဝင်ပေါက်လမ်းကြောင်း ၂၀ ကျော်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ညပိုင်းတွေမှာ တရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုတွေ မဖြစ်အောင် စစ်တပ်က အဓိက ကင်းလှည့်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ နယ်စပ် သတ်မှတ် ကုန်တင်ပို့နေရာကနေ ကုန်ပစ္စည်းတွေ အတင် အပို့လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ကာ မြန်မာ အော်ပရေတာတွေကို ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ကုန် ပို့ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်သလို ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ကုန်ပစ္စည်း ပို့ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အစိုးရအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ တာဝန်တွေကို တိတိကျကျ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဒေသအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ တရားမဝင် ဝင်ရောက်ဖို့လုပ်လာပါက ဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့ သာကတ်က တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္က လူ႔ဦးေႏွာက္ထဲအထိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ဟု ဆုိ
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ လူနာအခ်ဳိ႕မွာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္းနဲ႔ ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္ျခင္း စတဲ့အေ
Posted in Breaking News on Sep 11, 2020.
Welcome, Miralem Pjanic
Posted in Breaking News, sport on Sep 11, 2020.
ဗိုင်းရပ်စ် စောင့်ကညြ့်လူနာအဖစြ် သုံးကြိမ်ကြုံခဲ့သူ ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများ
နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတစ်ဦးဖစြ်တဲ့ ကိုရဲမျိုးဟိန်းဟာ ပငြ်သစ်မှာ အရေးကြီးအစည်းအဝေးတစ်ခုကို မတ်လ အစေ
Posted in Breaking News, Health on Sep 11, 2020.